ယခုကလေးငယ်သည်ချာလီနှင့်ချောကလက်စက်ရုံမှကြယ်များသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ - သတင်း
ဤတွင်သင့်အားစက္ကန့်ကြာအောင်ဆိုးရွားစွာဟောင်းနွမ်းစေမည့်လုံးဝမလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချာလီနှင့်ချောကလက်စက်ရုံသည် ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ Jonny Depp သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုလူသိရှင်ကြားခွဲခြားထားခြင်းကိုအလုပ်ရှုပ်နေပြီး Helena Bonham Carter သည်ရုပ်ရှင်ရုံဖန်သားပြင်များတွင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကလေး၏ကြယ်ပွင့်များမှအနည်းငယ်မျှမကြားရသေးသည်။ တူတူပဲ၊ Veruca Salt ကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာမင်းနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာကဘယ်အချိန်လဲ။
ထွက်လာသည်နှင့်အမျှသရုပ်ဆောင်သူများသည် ၁၅ နှစ်အတွင်းအိုမင်းခြင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနှစ်ဆယ်ကျော်နှောင်းပိုင်းများ၌သက်သောင့်သက်သာထိုင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အခုသူတို့ဘယ်မှာကြည့်ကြကုန်အံ့။
Charlie Bucket အဖြစ် Freddie Highmore
Freddie သည် Charlie Bucket ကိုတီးခတ်စဉ်က၎င်းအားရိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခင်စီမံကိန်းများကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် Johnny Depp ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မှအကြံပေးခဲ့သည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သူသည်ယခုအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကာချောကလက်စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံး၏အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်နှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ကောင်းသောအချိန် #TheGoodDoctor ! @FreddieHighmore pic.twitter.com/wBiWYyAmyh
- Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) မတ်လ 3, 2020
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သူသည် The Good Doctor တွင် Shaun Murphy အဖြစ်စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရွှေကမ္ဘာလုံးဆုအတွက်၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူလည်း Bates Motel တွင်အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်။
ငါ့ကို t ကို bro ဗီဒီယို tase
Highmore သည်သူ၏လူမှုမီဒီယာအားလုံးကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည် မိမိအ Instagram ကို သူ၌နောက်လိုက် ၆၀၀ ကျော်နှင့်အပြာရောင်အစက်အပြောက်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်သူရေးသားထားသည့်စာမူနှင့်စာတမ်းမရှိပါ။ ဖရက်ဒီသည်ဤသို့မဟုတ်အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။
Violet Beauregard အဖြစ် AnnaSophia Robb
AnnaSophia Robb သည်သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ပီကေဝါးခြင်းနှင့်နာမည်ကြီးဘလူးဘယ်ရီသို့ပြောင်းခြင်းစသည့်နယ်ပယ်တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်သူမအမေကတွန်းအားပေးခံခဲ့ရသော aloof ချန်ပီယံဖြစ်သူဖြစ်သည်။
ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်မဝတ်ရန် ... တစ် quarantine မေးခွန်းတစ်ခုကို
မျှဝေသည် AnnaSophia Robb (@annasophiarobb) ၂၀၂၀၊ မေလ ၆ ရက်ညနေ ၂း၀၀ နာရီ PDT တွင်
သူမသည်သရုပ်ဆောင်အလုပ်များစွာကိုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းနယူးယောက်တက္ကသိုလ်တွင် ၄ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူမ၏ Instagram မှသူမ bob ပျောက်ဆုံးသွားပြီးယခုတိုတောင်းသော pixies cut ကိုဖြတ်ကျော်လိုက်သည်။
သူမသည်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သူမထောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ Instagram တွင်နောက်လိုက်တစ်သန်းကျော်စုဆောင်းနေပြီးအခြားဈေးများထက်များစွာသာလွန်သည်။
ဂျူလီယာဆောင်းရာသီ Veruca ဆားအဖြစ်
Veruca Salt သည်အစကတည်းကမြည်းထဲတွင်အကြီးအကျယ်နာကျင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ pushover ဖခင်သည်သူမအားစက်ရုံပတ်လည်သို့သွားသောခရီးစဉ်အပါအ ၀ င်သူမလိုချင်သောအရာမှန်သမျှရရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည် Violet နှင့်အတူမိဘလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ရှိခဲ့သင့်ပါတယ်။
သငျသညျကတည်းကဘာမှသူမ၏မြင်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းစဉ်းစားဘို့သင့်ကိုခှငျ့လှတျလိမ့်မယ်, ထိုသို့ ... သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါကမှန်တယ်, သူမ၏နောက်ဆုံးအများပြည်သူအသွင်အပြင် 2006 ခုနှစ်တွင် da Bungalow အတွက် Dick နှင့် Dom အပေါ်တစ် ဦး အနုပညာရှင် guest ည့်သည်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲလိုက်တယ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့သူမအခုဘာလုပ်နေလဲ?
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နေ သူမဆရာ ၀ န်ဖြစ်ရန်လေ့ကျင့်နေကြောင်းသူမကမီးမောင်းထိုးပြခြင်းမှလုံးဝထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးသူမ၏ဇာတ်ကောင် Veruca ဘယ်လိုထင်မည်နည်း။ သူမသည်လူမှုရေးမီဒီယာတစ်ခုလုံးနှင့်အတူ Charlie Bucket ၏နောက်သို့လိုက်ခဲ့ဟန်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူမလက်ရှိပုံသဏ္ofာန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံရိပ်ဖြင့်သင့်အားအမှန်တကယ်မပေးနိုင်ပါ။
Augustus Gloop အဖြစ်ဖိလစ် Wiegratz
သင်, သြဂတ်စ် Gloop ကိုသိသလော အစာစားခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းတို့ကိုရပ်တန့်သွားအောင်မလုပ်နိုင်သည့် tubby ကောင်လေးသည်သူသည်လောဘကြီးသောကြောင့်ချောကလက်နှင့်ပြည့်နေသောမြစ်ထဲသို့ကျသွားသည်။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှလူတစ် ဦး ကသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးသူသည်စားကြူးပြီးအသည်းအသန်အ ၀ လွန်နေသောကလေး၏အခန်းကဏ္ fit နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ကိုထိုနေရာ၌ပင်သိသည်။
ကောင်းပြီ, ဒီအခန်းကဏ္Philipကို Philip Wiegratz က, သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်အခန်းကဏ္ gl Gloopy Gloop ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဒီအခန်းကဏ္ for အတွက်အလေးချိန်ထည့်စရာမလိုဘဲ fatsuit ကို ၀ တ်ဆင်ရတယ်၊
အချိန်တိုင်းအမေကပြောတယ် # payback #xletix #survivalofthefittest #discowirddreckig # 2girls1cup #fastgeweint #team #xitaso
မျှဝေသည် ဖိလိပ္ပု Wiegratz 5:09 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 8, 2019 ရက်တွင် (dr.wiegratz @)
ဖိလစ်သည်ချောကလက်စက်ရုံတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းဂျာမန်ရုပ်ရှင်များတွင်လုံးဝပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ သူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှသူသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ပျူတာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ ငါတို့အဘို့ပွဲ။
Mike Teavee အဖြစ်ဂျော်ဒန် Fry
လေးထောင့်ကွက်မျက်လုံးပြူးနေသော Mike Teavee သည်စက်ရုံရှိ William Wonka သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ပါ၊ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကာလအတွင်းသူ၏ထိန်းချုပ်သူကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သော်လည်းအရာရာသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့ပြီးသူသည်စိမ်းလန်းစိုပြေလာသည်။ full-on စကိတ် dude ။
မျှဝေသည် ဂျော်ဒန် Fry 10:16 pm တွင် PDT မှာ, 2020, ဇွန် 23, (@jordanpaulfry)
ဇာတ်ကောင်နောက်ကွယ်မှလူသည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိဂျော်ဒန်ဖရီဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ခရက်ဒစ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှဖြစ်ပြီး၊ သူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အခြားထင်ရှားသည့်စီမံကိန်းမှာ Robinsons နှင့်တွေ့ဆုံသည့်ကာတွန်းဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ သူက Instagram ကိုသူ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံပြင်တွေတင်တာကိုတော်တော်လေးတက်ကြွတယ်၊
• Spy Kids မှ Cortez မိသားစုကိုမှတ်မိသလား။ ဤတွင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယခုအထိပါပဲယျ